Firosoana amin’ireo tetikasa samihafa :: Tsy ho sasa-miandry ny famatsiam-bola avy any ivelany ny Filoha Rajoelina • AoRaha
Firosoana amin’ireo tetikasa samihafa Tsy ho sasa-miandry ny famatsiam-bola avy any ivelany ny Filoha Rajoelina
Tsy hiandry ny indray mitete. Hiroso amin’ny fanorenana an’ireo fotodrafitrasa nampanantenainy ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry,na dia mbola mitarazoka aza ny famatsiam-bola avy any ivelany. Tamin’ny fanombohana tamin’ny fomba ofisialy ny asa fanitarana sy ny fanarenana ny lakandranon’i Pangalana, tamin’ny sabotsy lasa teo, no nilazany fa hiasa amin’izay vola eo am-pelantanany aloha ny fitondram-panjakana, mandrapahatongan’ny vola avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara.
« Mety ho am-bolana na mety ho herintaona mihitsy aza ireny fanampiana ireny vao ho tonga eto amintsika. Tsy afaka ny hiandry isika satria mila mandeha haingana ny asa fampandrosoana. Efa vita tanteraka izao ny antso tolo-bidy momba ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-44 mampitohy an’ i Moramanga sy Ambatondrazaka ary efa misy ny orinasa hanao azy. Afaka iray volana dia hanomboka ny asa », hoy izy.
Lalana sy trano mijoalajoala
Omaly ihany koa no niasa avy hatrany ny fitaovana hoentina hanitarana sy hikaohana ny lakandranon’i Pangalana mba hahafahan’ireo sambo lehibe mivezivezy, hiainga ao Manangareza ary hipaka hatrany Mananjary. Efa mijoro ireo ivon-toerana fanaraha-maso ny fifamoivoizana an-dranomamy miainga ao Toamasina.
» Isika no mitarika ny lamasinina. Tsy maintsy tody amin’ny tanjona kendrena isika », hoy ny Filoha sady nampahatsiahy ny fihanianana nataony teo imason’ny Papa Fransoa amin’ny fanatanterahana an’ireo velirano nampanantenainy.
Ankilan’izay, tonga nandray an’ireo fitaovana vaovao hoentina manafaingana ny fibatana sy ny famindrana an’ireo entana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ihany koa i Andry Rajoelina. Nambarany fa efa nijery an’ireo toerana hananganana an’ireo trano mijoalajoala sy ireo trano mora ao Toamasina ny Filoham-pirenena.
Nanararaotra nitsidika ny fivoaran’ireo asa fanamboarana an’ilay lalambe migodana miainga eo amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina mihazo ny lalam- pirenena faharoa ny Filoham-pirenena, omaly. Nojereny ifotony ny fanamboarana ny lalana mampitohy an’i Toamasina sy Soanierana Ivongo. Efa hita ihany koa ny toerana hananganana an’ireo trano mijoalajoala ao Toamasina. Hisy ny lamina hapetraka manodidina an’ireo tetikasa ireo ato ho ato.
Hatsiakana an-dampihazo :: Kofon’ny fihomehezana ireo mpijery an-dry Etsetra Etsetra sy Barhone
Fifidianana Ben’ny tanana :: Hohamarinina farany ny antontan-taratasin’ireo kandidà